पिज़्ज़ाहटको काम छोडेर किन हास्य कलाकार राजाराम नेपाल आए? अमेरिकाले काम गराउन डिभी दिएर बोलाउने हो, न की मोज मस्ती गर्नलाई हो भन्ने उनको अनुभव ठुलोपर्दामा ! – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
पिज़्ज़ाहटको काम छोडेर किन हास्य कलाकार राजाराम नेपाल आए? अमेरिकाले काम गराउन डिभी दिएर बोलाउने हो, न की मोज मस्ती गर्नलाई हो भन्ने उनको अनुभव ठुलोपर्दामा !
794 पल्ट हेरिएको